Ngo-2016, ngaphansi kwe-UEFA yeqembu lebhola elivela emazweni aseYurophu, isenzakalo esibalulekile saqala - i-European Championship. Umqhudelwano uqala ngoJuni 10 futhi uphela ngenyanga. Amaqembu angu-24 abamba iqhaza emincintiswaneni eyenzeka ezinkundleni eziyi-10 eFrance.
I-European Football Championship - umcimbi ezweni lezemidlalo
Lena yi-15 ye-European Football Championship. Isiqubulo somcimbi obalulekile wezemidlalo uzwakala sengathi "Rendezvous," futhi kufanekisela kakhulu. Ngemva kokuhlangana namaqembu amabili noma ngaphezulu kanye nabalandeli abayizinkulungwane eziningana babuthana ukuhlangana. Ngo-2016, i-Albania, i-Iceland, i-Wales, iSlovakia neNyakatho Ireland kuqala yaba yingxenye kulo mcimbi. Ithimba laseRussia lajoyina leli qembu neSlovakia naseWales. Umdlalo wokuqala wethimba likazwelonke ngoJune 11. Lo kwakuwumhlangano wokuqala oqhakazile futhi onzima lapho iRussia neNgilandi badlala khona. I-Brand "NIKA" ngokukhethekile kulo mcimbi wezemidlalo wokubaluleka kwezwe iye yasungula iwashi nge-design eyingqayizivele "EURO 2016". Iqoqo elinganiselwe lezesekeli kubalandeli bangempela liyamangaza ngokucindezela kwabo okuhlukumezayo, lula nokushintshashintsha. Indoda ye-SUPER VICTOR yaba ngumculi womncintiswano. Iwashi ikhiqizwa nguNIKA. Amagama athi "NIKA" noVictor abonisa ukunqoba futhi yilokho okufanekiselwa khona imigomo ebekiwe.
Amahora aphezulu ommeli onamandla nesibindi wesigamu esiphezulu ngeke amvumele ukuthi aphuze umdlalo lapho iqhaza elithandayo lihlanganyela khona.
I-watch ye-Stylish njengendlela yokubonakalisa
Uma ungazi ukuthi yini ongayinika abalandeli bebhola, cabanga ukuthi le nkinga ixazululwe. I-watch "" evela ku-"NIKA" isipho esingcono kunazo zonke umuntu ophethe ibhola ngaphezu kwezemidlalo. Ngokwesiko, abamele iqhaza eliqinile bayakwazisa izinto ezingagcizelela ukuqina kwazo, ukuhlonipha nokuzethemba. Kulabo abaye baphumelela emisebenzini yabo nakweminye imikhakha yokuphila, kuhlale kunokwenzeka ukwethula izesekeli ezithembele ekuziphatheni komuntu ngamunye. Ukubuka okungavamile, okubukhali ngaphandle kwezakhi eziziqhenya nesithunzi kuzogcwalisa lo msebenzi. I-accessory, ehlala ikhona, izosiza indoda ukuqedela isithombe sayo, yenza kube mnandi, kuhlanganiswe futhi kuhlanganiswe. Ibhizinisi lamadoda noma isitayela sezemidlalo inhlanganisela yamandla, ukuvimbela kanye nenhloso. Ukwenza isimo sekhwalithi, esiwusizo futhi esingakhohlwayo ukuhambisana nezitayela ezinjalo ngeke kube nzima. Amawashi avelele, akhululwe eqoqweni elinganiselwe, azokujabulisa indoda eyaziwa kakhulu ukunambitheka okukhulu, ukuchuma kwemali kanye nendlela yokuhweba. Ukubukwa okungavamile okwethenjelwa kuzokuvumela umuntu aziqhenye ukwenza isandla.
Ubuqili bokukhetha amawashi wesilisa njengesipho
Uma ukhetha isipho, kufanelekile ukucubungula izinhlobo ezikhona ze-chronometers. Ama-classic connoisseurs anconywa ukuba abonise izinguqulo eziqinile, ezihlelwe kahle. Akufanelekile ukusebenzisa amamodeli anezinhlobonhlobo, ezihlotsheni eziyinkimbinkimbi. Ukudayela okuzungezile, okwesigxathu noma kwesigcawu kuhlangene nesigqoko esikhwameni sesikhumba esimnyama njalo kuyingqayizivele yama-topic ehambisana nezithombe zebhizinisi. Ngisho noma ummeleli wesigamu esiphezulu usuvele enamamodeli amaningi, akekho oyokwenqaba inguqulo ewusizo, engavamile, ekhangayo yewashi. Ngenxa yesihenqo esikhanyayo, indoda izokwazi ukwenza umqondo ofanele ngaye futhi yenze isithombe sangempela nesibindi. Okumnandi, amahora okugcoba kufanele abekwe kahle, enhle futhi ngesikhathi esifanayo asebenzayo.
Isipho esinobuhle ku-fan fan
Ukukhetha isipho esithakazelisayo ezandleni zomuntu, kubalulekile ukuthi ungacabangi ngendlela yakhe yokuphila kuphela, kodwa futhi nokuzilibazisa. Uma insizwa enomdlandla ilandela i-European Football Championship 2016, ngokuqinisekile izoyithokozisa i-EURO 2016 "," ekhishwe igama elithi "NIKA" ngokukhethekile kulo mcimbi wezemidlalo.
Lo mfanekiso uveza ngokugcwele umqondo wezemidlalo owenziwa eFrance. Iqoqo elilinganiselwe lamawashi "EURO 2016" - ukuhlelwa kwezinto zobuciko zanamuhla. Lolu chungechunge lubukeka ngokusebenza kwalo, lapho ukuthembeka kohlelo lweSwitzerland kuhlanganiswa khona, kanye nobuciko be-jeweler yabalindi ababukeli bamaRussia abahola phambili.
Izici ze-watch watch «EURO 2016»
"I-EURO 2016" iwubukele obuhlukile bebhola. Ukudayela kwabo kwenziwa ngesiliva futhi kuhlanganiswe neqabunga legolide. Umdlali webhola, ovezwe ensimini eyigugu, ubonisa konke okubaluleke kakhulu, ukubaluleka kwemigomo eyakhelwe yiqembu lakho ozithandayo.
Imodeli eyingqayizivele ngendwangu emnyama eyenziwe yesikhumba sangempela izomangaza abangani bakho bese yenza isithombe sithandeke, sibe nesinye futhi sibe namandla. I-accessory izobukeka ibe mnandi njengekhanda lomuntu ohloniphekile, nasesandleni somuzi wedolobha. I-chronograph ekhangayo, ebonakalayo, ekhishwe uchungechunge olulinganiselwe, ingaba umphumela omuhle kakhulu wokuthandwa kwezemidlalo nganoma isiphi isikhathi. Lesi sesekeli sizohambisana ngokuphelele nomuntu owinile - indoda ephumelela njalo kukho konke. Ubuntu obuphumelelayo, obunenjongo, obusebenzayo ngokuqinisekile buzobonga ukufaniswa komfanekiso "EURO 2016". Ukunqoba okukhanyayo, indlela yokuphumelela, ukuphumelela okusha akuyona nje uphawu lwezemidlalo nabalandeli, kodwa futhi namadoda angokoqobo anamuhla, ahlala nesinyathelo ngezikhathi. Ukubuka "EURO 2016" kufanelwe ukuba yinto yokuzithandela eyintandokazi kulabo abazethembayo ngokwabo kanye nokunqoba kwabo.
Indlela yokugqoka kahle udweshu wesifazane: Ulwazi olubalulekile lendodakazi!
I-Feng Shui Jewelry
Indlela yokukhetha ubucwebe ngombala we-manicure: amathiphu amathathu abalulekile
Indlela yokubopha isikhafu somfazi
Imfihlakalo yehlane: i-Cactus de Cartier uchungechunge lwezingcweti zangaphandle
Indlela yokuphatha imivimbo ye-varicose
Goose nge-apula kumkhono
Ukuphila komuntu siqu we-actress Yevgenia Kryukova
Iklabishi yaseTywede isitayela seYurophu
Amakhamini e-Baked zucchini
Imfihlo yomshado omuhle futhi ophumelelayo
Ungakhetha kanjani ukhilimu we-salon yokuqothula?
UVladimir Putin wakhuluma okokuqala ngabazukulu bakhe
Indlela yokuziphatha uma owesifazane enesifo sokucindezeleka ngemuva kwe-postpartum?
Kusho ukushisa kwelanga
Indlela enembile yokuhlelwa kwesikhala sakho sokuhlala
I-cosmetology yekhwalithi ku-salon beauty
Isaladi kusuka e-marinated sea cocktail